Football Khabar » बार्सिलोनाद्वारा भाल्भर्डेको विकल्पमा दुई प्रशिक्षकको नाम तयार !
बार्सिलोनाद्वारा भाल्भर्डेको विकल्पमा दुई प्रशिक्षकको नाम तयार !
स्पेनिस क्लब बार्सिलोना हालका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेको नेतृत्वमा लयमा छैन । समग्रमा उसले सिजनको सुरुआत खराब तरिकाले गरेको थियो । तर, पछिल्ला दुई खेलमा उसले जित निकालेर लय समातेको छ । यद्यपि, बार्सिलोनमा भाल्भर्डेको भविष्यत सुनिश्चित भने छैन । आगामी दिनमा राम्रो नतिजा नआए क्लबले जुनसुकै बेला पनि भाल्भर्डेलाई बर्खास्त गर्ने सम्भावना छ ।
यदि अबका दिनमा बार्सिलोनाले उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न नसके वा केही खराब नतिजा व्यहोरे भाल्भर्डेको विकल्प बार्सिलोनाले खोज्नेछ । त्यसको तयारीमा उसले सम्भावित नामसमेत तयार पारेको छ । यस्तो रिपोर्ट स्पेनिस र अर्जेन्टिनी मिडियाले प्रमुखतासाथ छापेका छन् । मिडिया रिपोर्टअनुसार बार्सिलोनाले यदि भाल्भर्डेलाई पदबाट हटाउनु परे पहिलो रोजाइमा अर्जेन्टिनी क्लब रिभर प्लेटका मार्सेलो गालार्डोलाई राखेको छ ।
हाल रिभर प्लेटेलाई उत्कृष्ट नेतृत्व दिइरहेका उनको खेलाउने शैली बार्सिलोनासँग मिल्ने भएकाले बार्सिलोनाले उनलाई नयाँ प्रशिक्षक बनाउने सम्भावना प्रबल छ । उनी अर्जेन्टिनी म्यानेजर हुन् । बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सीसँग पनि गालार्डोको निकै राम्रो सम्बनध रहेको छ ।
त्यसपछि बार्सिलोनाले सूचीमा राखेका अर्का प्रशिक्षक हुन्, डच क्लब आयाक्सका इरिक टेन हग । पछिल्ला सिजन आयाक्सलाई युरोपियन फुटबलमा नयाँ उचाइ दिलाउन योगदान दिएका र रणनीतिक फुटलमा माहिर मानिने इरिक बार्सिलोनाका नयाँ प्रशिक्षक बन्न सक्न व्यक्तिको सूचीमा रहेको चर्चा छ ।
प्रकाशित मिति १८ आश्विन २०७६, शनिबार १०:३७